Kala beddelashada of Music ka ipod jir ah u iPhone waxaa la samayn karaa iyadoo laba siyaabood. Sida caadiga ah dadka, laga yaabo in fikrad in hanaanka wareejinta of music xagga jirka ah iPod in Computer marka hore, ka dibna iyaga ku wareejin ka Computer si ay iPhone. Laakiin, waxa uu leeyahay dhibaato in Lugood ee ma ogola syncing oo ka mid ah qalabka macruufka in Computer ah; Si kastaba ha ahaatee waxay u saamaxdaa habka dambe. Sidaas darteed, talaabooyinka soo socda ayaa lagama maarmaan u ah suuqa kala iibsiga guul Music ka iPhone jir ah u iphone.
• Dhammaan aad u baahan tahay marka hore waa rakibo ee Lugood ee your computer.
• Lugood Markaas Open
• bareesada hore iPod galay your computer
• In Lugood, guji File ka dibna nidaameed
• Ka dib markii in la dhameystiro, guji File Transfer iyo Iibsasho
• tuurid iyo korontada aad iPod
• bareesada in aad iPhone
• Tag laybareeriga Lugood aad galay., Halkaas oo music oo dhan waxa lagu kaydiyaa
• jiid music aad rabto rogtid oo aad iPhone
• Geedi socodka waxaa loo sameeyaa
Sidee si ay u gudbiyaan si fudud music u dhexeeya qalabka macruufka ama u dhexeeya qalabka macruufka iyo computer?
App A Wonderful ujeeddo ah ee Transfer of music ka iPhone in computer kala ah 'Wondershare TunesGo', waa hab fiican, taas oo loo isticmaali karaa xalka kala duwan. Wuxu u adeegaa ujeedada wareejinta music ka iPhone in MAC Transfer, iphone in Transfer PC, macruufka in Lugood Transfer, macruufka in Computer Transfer iyo Android inay Transfer Computer. App Tani waxaa loo isticmaali karaa sida gurmad cajiib ah oo dhan music ka iPhone iyo qalabka kale ee aad PC aad.
Maxaad u dooratay Wondershare TunesGo?
Tan, habka wareejinta oo dhameystiran waa si fudud oo si deg deg ah shaqada, TunesGo Wondershare ah, waa app weyn ujeedada iyo taagan mid la heli karo dad badan ugu fiican ee suuqa. Tani waa qalab la yaab leh ujeeddo ah kala iibsiga tooska ah ee files warbaahinta ka ipod kasta si iPhone oo aan u baahan ee Lugood ah.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo doorashada Wondershare TunesGo ah, ka mid ah oo ra'iisul waa sida soo socota ee:
• Lifetime Casriyaynta Free
• Wondershare TunesGo share Lugood playlist la One-click
• Waxa ay u maareeyaan Music aan xadeyn Lugood
• TunesGo si toos ah tafaasiil iyo ilaa nadiifiyaa maktabadda music la mid click
• Waxaa jabo caqabadaha of Lugood iyo ogolaanaysaa Androiders isticmaali Lugood sida qalab macruufka ah.
• Download iyo record music ka YouTube ama goobaha kale music
Talaabooyinka ay u isticmaalaan TunesGo Wondershare
Halkan, waxaan ka wada hadli doonaan tallaabooyinka ku saabsan sida loo isticmaali TunesGo Wondershare. Music Tranferring ka iPhone in Computer lagu dhammeystiri karo in tallaabooyinkan soo socda.
• Riix Transfer Music Option , gali bogga Music Transfer ka dib markii qalab (Halkan, iphone) xiran yahay
• Hubi oo dhan playlists ama heeso kuwa inay u dhoofiyaan si Lugood, guji dhoofinta iyo markaas dhoofiyo Computer ama Mac.
• sawir hoose waxay muujinaysaa tallaabooyinka
TunesGo Wondershare buuxin kartaa dheeraad ah oo ka soo hadhay kala iibsiga ee files ka iPhone in Computer. Waxaa kale oo jiidi karaan jeedi Music ka PC iyo Mac / Lugood in Device. Talaabooyinkan hoos ku tilmaamay:
• Riix Music Transfer , gali bogga Music Transfer ka dib markii qalab ku xiran tahay
• Dooro music ka PC ama Mac ama Lugood, jiididda iyo hoos u qalab ama playlists
• snapshots Waxaa hoos ku xusan, isla
Arrintan oo uu weheliyo labadan shuqullada kor ku xusan, TunesGo Wondershare ee loo isticmaali karo ujeedada ka mid ah la tayeeyo Lugood Library, ka Lugood Bedelka Music inay Device, ka PC Bedelka Music inay Device, Bedelka Music, playlist ka Device in Lugood, Bedelka Music ka Device in PC ama Mac, Calan Jidka Default faylka wareejiyo Lugood, Set External SD Card sida Default nidaameed Jidka faylka wareejiyo Android, Calan Default nidaameed Jidka faylka wareejiyo Android, awood xiridda, Toggling u Qalabka Multiple iyo qaar badan.
> Resource > iPad > Sida loo duug ipod wareejiyo music in iphone / iPad